Vnsmart2 — stemgeeks
phyothuzar in #proofofbrain •4months ago
Vnsmart ဟာဆိုရင် အဆင့်၆ဆင့်နဲ့သွားနေပြီးခုဆိုရင်အဆင့်၃အထိရောက်ရှိနေပါပြီ လက်ရှိမှာ ပေါက်စျေးအဖြစ် internal exchange0.3496​$ဖြစ်နေပြီး အဆင့်၆ရောက်ရင် 3$အထိရှိမယ်လို့သိရပါတယ် market အဖွင့်စျေးကို 3$ကနေစတင်listမယ်လို့လည်းကြေငြာထားတာတွေ့ရပါတယ် လက်ရှိစျေးနဲ့ freeတူးပြီးရလာတဲ့ vnc tokenကို imtoken walletထဲကို ထုတ်ပြီး ဥထားမယ်ဆိုရင်လည်းရသလို လက်ရှိစျေးနဲ့သူပေးတဲ့tokenကိုပဲ သူ့mining appထဲတွင်exchangeလုပ်၍usdtထုတ်ချင်ရင်လဲ ရရှိပါကြောင်း ပြောပြချင်ပါတယ်
Freeတူးပြီးရလာတဲ့ vncကို exchangeလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ services chargeအနေနဲ့ 60%တောင်ဖြတ်ထားခံရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် exchangeမလုပ်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ် ရေရှည်စီမံကိန်းဆိုပေမယ့် vnsmartက အတိအကျ ရက်စွဲပါရှိပါတယ် ၂၀၂၄ရောက်လျှင်သေချာပေါက်ရွှေဖြစ်ပြီဆိုတာကိုလည်းကြေငြာထားပါတယ်😁
တကယ်လို့သာမိတ်ဆွေတို့က 60%မပေးပဲ 5%လောက်နဲ့exchangeလုပ်ချင်ရင် depoအနေနဲ့$300လိုအပ်မှာဖြစ်ပြီး စွန့်စားရဲရင် စမ်းကြည့်ကြပါ
လက်ရှိမှာ vnsmartက user၂သိန်းကျော်သာရှိသေးသော်လည်း user၁သန်းပြည့်ရင် mining power လျှော့ချသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လဲ ကြေငြာထားပါတယ် free userများအနေနဲ့ 365ရက် freeတူးရသမျှကို ထုတ်နိုင်သော်လည်း365ရက်ပြည့်သွားလျှင် စက်ဝယ်ရန် depositတင်ရမည်ဖြစ်သည်
Trading ရယ်miningရယ် refaralရယ်ဆိုပြီး စနစ်သုံးမျိုးပါဝင်ပါတယ် ကိုယ်အားသန်ရာစမ်းကြည့်စေလိုပါတယ်😁
#money #freemoney #technology
4 months ago in #proofofbrain by phyothuzar
Congratulations @phyothuzar! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :
You published more than 10 posts.
Your next target is to reach 20 posts.